Farxad Sanadka Cusub ... Malaha | Martech Zone
Axad, Disembar 31, 2006 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Galabta waxaan rajeynayaa inaan la qaato habeenka sanadka cusub saaxiibo waa weyn, Bill iyo Carla. Xoogaa waanu ciyaari doonnaa Cranium cayaaraha, daawato fiidiyowyada qaar, oo isdeji inta aan sugeyno 2007 in ay soo gasho aamusnaan iyo (rajo ahaan) nabadgelyo.
UPDATE: Waxaan horey wax uga qoray xiriir ganacsi oo adag oo aan la galay blogger kale. Codsi ay ii soo direen qaar ka mid ah akhristayaasha kale, waxaan hayn doonaa qaybtan qayb ka mid ah. Mahadsanid, waxaan ka shaqeyneynaa arrimaha taagan.
Dhibaatooyinka Farsamada, Fadlan Istaag
Jan 2, 2007 saacadu markay ahayd 9:03 PM
Waxaan ku faraxsanahay in tan laga shaqeynayo. Waxaan arkay qoraalkii asalka ahaa, oo aad baan kaaga walwalsanaa. Tan iyo markii aan dhawaanta la murugooday geerida xaaskeyga (waan kala tagnay laakiin saaxiibbada ugu fiican) Waxaan si QARXIS leh ula xiriiri karaa Fasaxyada Fasaxa.
Miinadaydu waxay leedahay qoraal farxad leh, sidoo kale. Waxay jeceshahay kirismaska, laakiin caafimaadkeeda ayaa ka hor istaagay inay "si sax ah u qabato" sanadihii la soo dhaafay. Waxaan xoogaa raaxada ah ogaanayaa inay haysatay Christmas-kii ugu fiicnaa weli.